Khabar Break - नेपाल एक राष्ट्र हो या द्विराष्ट्र ?
नेपाल एक राष्ट्र हो या द्विराष्ट्र ?
यम सिलवाल ,
नेपालको राजनीति इतिहास हेर्ने हो भने आन्तरिक र वाह्य स्वार्थ र प्रभावहरुका कारण अनवरत रुपमा अस्थिर छ । जनताले चुनेर प्रजातान्त्रीक विधिद्वारा निर्मित सरकारले आजसम्म एउटा पनि कार्यकाल पुरा गर्न सकेको छैन । यद्यपि विश्व मानचित्रमा र विश्व राजनीति तथा इतिहासमा १५–१६ वटा राष्ट्रहरु मात्र रहँदा पनि नेपालले आफ्नो अस्तित्वस्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा स्थापित हुन सफल हुँदै आइरहेको छ । बेलायत जस्तो कहिल्यै सुर्य नअस्ताउने भनेर समेत चिनिने तत्कालिन विशाल साम्राज्यसँग समेत दैत्य सम्बन्ध कायम भएको २०० वर्ष नागि सकेको छ । युद्ध कौशलताको लागि समेत अब्बल रहेको विश्व जगतमा सन्देश प्रवाह गर्न सफल रहेको यस राष्ट्रको गर्भिलो इतिहास छ ।
यति लामो ऐतिहासकि गौरव बोकेको देश आफैमा मनोरम प्रकृतिको बरदानले सुःसज्जित सुन्दरताले भरिपुर्ण छ । यक्तिका राम्रा देशका नागरिक विश्वमा सबै भन्दा सुखी, वैभवशाली र समृद्ध हुनुपर्ने हो । दुर्भाग्य भनौँ या के भनौँ, देश त्यसको ठिक विपरित परिस्थितीमा छ ।
२००७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात राजनैतिक अस्थिरताको सृङखला चलिरहेको छ । नेपाली जनता जहिले पनि लोकतान्त्रीक राजनैतिक प्रणाली तथा यसको विश्वव्यापी मान्यताहरु अप्नायर विकसित र समृद्ध हुने अभिलाषा निरन्तर रुपमा प्रकट गर्दै आएका छन् । यसका लागि नेपाली जनताहरुले समानतावादको जरा उखलेका छन् , सामाजिक विभेद निर्मुल पारि समतामुलक समाज र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि पटकपटक ठूला र स–साना आन्दोलनहरुमा समावेश रहँदै आएका छन् । खासगरी २०६२÷६३ को राजनैतिक परिवर्तन र देशले संविधानसभा मार्फत् संविधान निर्माण गरी ।राजनैतिक अस्तीत्व मार्फत् आर्थिक समृद्धी हासिल गरी सुखी र शान्त देश बन्ने अभिलाषा राखेका थिए । पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन परिणामको मर्म र जनभावना अनुरुप २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो । जनप्रतिनिधीहरुको करिब करिब सर्वसम्मतीको अवस्थामा संविधान जारी भएता पनि छिमेकी राष्ट्र भारतले विशेष दुत पठाएर संविधान जारी नगर्न निर्देशन दियो । उक्त निर्देशन पालना नगरेपछि अर्को धम्की दिइयो , ‘‘भारतको समर्थन वा निर्देशन नमानी जारी भएको संविधान कसरी लागु हुँदो रहेछ हेरौँला ।’’ । यसपश्चात् नेपाली जनताले अमानविय र क्रुर नाकाबन्दी जस्तो सास्ती त्यो पनि विनासकारी भुकम्पसँगै सहनु प¥यो ।
नेपाली जनताको एकता देखी अतालीएर र स्वाभीमानको तापले भारत बाध्य भयो । तत्कालीन नेपाल सरकारले नाकाबन्धीको विकल्प पहिल्ययाउदै चीनसँग गरेको सम्झैताको कारण भारतीय राजनिति तथा सञ्चार माध्यमहरुमा खुल्लम खुल्ला कम्पन भयो । नेपालीको बिचको एकता तोड्न नसके आफ्नो सवर्थ पुरा नहुने निष्कर्ष साथ मधेस केन्द्रीत नाममा खुलेको केही राजनीतिक दललाई आफ्नो मुख्य अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्दै नेपाली काँग्रेस मार्फत् मुख्य राजनीतिक दलहरुको संक्रमणकालसम्म मिलेर छिटो देशलाई स्थायित्व दिने समझदारी टुटाउन भारत सफल रह्यो । यसको ९ महिना पछि प्रचण्डलाई प्रधनमन्त्रीको ललिपप देखाउँदै सरकार परिवर्तन मार्फत् देशको दिशा दुर्गधीतर्फ मोड्न भारत सफल भएको छ । यसलाई सपल पार्न र संस्थागत गर्न संविधान संसोधनमा नागरिकता र प्रदेशको सिमा हेरफेर गरी देशको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई टक्रावको अवस्थामा अहिले देश उभिएको छ । भारतको विधानसभा सक्तापक्ष दल र नेपाली जनताको जगमा प्रतिपक्ष दल बिचको आमने सामनेको अवस्था बनेको छ । संविधान गतिशिल हुनुपर्दछ भनेर नै नेपालको संविधान २०७२ले यस मान्यतालाई स्वीकार गरी उक्त प्रावधान राखेको छ । यो प्रावधान राष्ट्रिय स्वार्थ र जनतालाई मजबुत बनाउन देश हितका लागि आवश्यक संसोधन गर्दै जानको लागि हो । तर, अहिले नागरिकता सम्बन्धी संसोधन र सिमा फेरबदलको संसोधन प्रस्तावले संस्थागत रुपमा देशको राष्ट्रिय अस्मिता , अखण्डता, स्वतन्त्रता , समृद्धी तथा स्थायीत्वमा दुरगामी बिसम परिस्थती तर्फ देशलाई लाने प्रयत्नको नियतबाट आएको छ । झ्वाट्ट हेर्दा सामान्य लाग्ने देखिने संघियताका लागि देशभित्रकै सिमाना हो, जता पारे पनि के फरक पर्छ र ?? भन्ने तर्क दिई भ्रम पार्ने पनि गरिन्छ । तर जनअपेक्षा र स्थानीय वासिन्दाको चाहना र भावना विपरित जर्बजस्ती पहाड र तराई भौगोेलिक रुपले विभाजन गरी प्रदेश बनाउने पर्छ भन्ने प्रस्ताव नेपाल र नेपाली जनताको आवश्यकता र माग हुँदै होइनन् । महन्त ठाकुर जीले उद्घोष गर्दै आइरहेको नेपाल भित्र दुई राष्ट्र छ , मधेस अलग राष्ट्र हो भन्ने भनाईलाई स्थापति गर्नका लागि ५ नं प्रदेशमा पहाडी भुभाग अलग गरेर सुरुवात गर्न खोजीएको मात्र हो । अहिले ५ नं प्रदेशबाटै किन संसोधन सुरु भयो त भन्ने जिज्ञासा पनि उठ्न सक्छ । झापा, मोरङ,सुनसरी जिल्लाहरु चलाउन त्यस क्षेत्रका शक्तिशाली नेताहरु केपी ओली, विजयकुमार गक्षदार, कृष्ण सिटौला, लागयतको प्रभाव र कैलाली कञ्चनपुर स्वयम् शेरबहादुर देउवाले यस अघिनै अखण्ड सुदर पश्चिमको अभियानमा रहिसकेका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा कम प्रभाव पार्ने नेता मात्र भएको ५ नं प्रदेशनै चलाउन सहज भएकाले हो । त्यसै गरी ५ नं प्रदेश सबैभन्दा बढी समुदाय मिलेर बसेको क्षेत्र भएकाले पनि यो नै निशानामा पर्न गएको हो । अहिले ५ नं प्रदेशबाट सुरुवात गर्ने र सफलता हासिल भएमा यसै नजिरको आधारमा बाँकी ५ जिल्लाहरु पछि टुक््रयाउने मनोसाय भारतको छ । केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले अजम्बरी अमृत खाएका छैनन् र उनीहरुको प्रभाव नहुने मौका पछि आउने निश्चित भएकाले पनि हाललाई ५ नं प्रदेश रोजीएको छ । यो प्रस्ताव तराई मधेसमा बसोबास गर्ने आम नेपालीको अहितमा छ । यसले हित गर्दैन । संविधानको धारा ५६ को उपधारा ३ सँग सम्बन्धित प्रदेश संरचना संसोधन गर्न पहिला नयाँ निर्वाचन हुन आवश्यक छ । त्यसैले यो असंवैधानिक नै छ । त्यसै गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न विदेशी नागरिकले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने प्रावधान संसोधन गरी नागरिकता त्याग गर्ने प्रकृया सुरु गर्नसाथ नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने भन्ने नागरिकता सम्बन्धी संसोधन पनि आपत्तीजनक छ । यसले नेपाल दुई राष्ट्र हो भन्ने आशयलाई मदत गर्न र स्थापित गर्न चाहेको छ । अब नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले संस्थागत रुपमा यो स्विकारेका हो ? जनतालाई जवाफ चाहिएको छ । यद्यपि नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतका सत्ता पक्षीय अन्य दल तथा मधेस केन्द्रीत दलका सजग र बुझेका कार्यकर्ता र नेताहरु यो संसोधनको विरुद्धमा लागिरहेका छन् । चरम पद लोलुप्तामा सत्ता लिप्सा र व्यत्तिगत स्वार्थ पुर्तिका लागि आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ता नेपाली जनताको आकांक्षा र राष्ट्रहीतलाई निमठ्न प्रचण्ड–शेरबहादुर गठबन्धन लागी परेको छ । जनमतको खिल्ली उडाइँदै छ ।
झन् त विपी कोइरालाले राष्ट्रियता र नेपाली सवाभिमानको मुद्दा अगाडी बढाउँदा व्यक्तिगत रुपमा अनेकौँ हण्डर खाए, मदन भयडारीले ज्यानै गुमाए, राजा विरेन्द्रको वंश विनाश भयो । तर तीनै व्यक्तित्वहरुको वलिदानको जगमा, ज्ञात अज्ञात सहिदहरुको जिवन आहुतीले आज पनि आम नेपालीमा राष्ट्रिय भावनाले जरा गाडेको छ । क्षणिक व्यक्तिगत स्वार्थमा र लोभलालचमा फसेको केही राजनैतिक नेतृत्वहरु मात्र राष्ट्रहित विपरित लागेका छन् । राजनीतिक स्थायीत्व र प्रगतीकोबाधक बनेका छन् । २०६२÷६३को जनआन्दोलन पश्चात् राष्ट्र प्रमुख र कार्यकारी प्रमुख दुवै पदमा रहेका बेला स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला नै उकुस मुकुस हुँदै देशको अस्तित्वसंकटमा पर्न लाग्यो भनी चिन्ता व्यक्त गर्दै चा।तीय दबाबमा केही सम्झौता गर्न पुगे ।त्यसलाई सच्याउन आंशिक रुपमा स्वर्गीय सुशिल कोइरालाबाट प्रयत्न भएकै हो । तर वर्तमान नेपाली कांग्रेस नेतृत्व राष्ट्रिय अस्मिताप्रति दुराग्रहरी भएर लागेको छ । मुलुकमा दुई राष्ट्रको एजेण्डा स्थापना गर्न कम्मर कसेर अगाडी बढेको छ । यो अवस्थामा देश जोगाउने कार्यभार प्रमुख प्रतिपक्षी र पतिपक्ष गठबन्धनको नेतृत्वमा आम जनताको काँधमा आएको छ ।